Cudurka Ebola oo Mar kale lagu arkay Liberia – Radio Daljir
Cudurka Ebola oo Mar kale lagu arkay Liberia
Luulyo 3, 2015 2:43 b 0
Jimco, Luuliyo 03, 2015 (Daljir) —Kiisas Cudurka Ebola ah ayaa mar kale lagu arkay magaalada Nedowein ee Liberia, sida ay Sheegtay Wasiir ku xigeenka Caafimaadka iyo madaxa guud ee la dagaalanka cudurka Ebola, Tolbert Nyenswah.
Laba qof ayaa lagu arkay cudurkan kuwaasoo ahaa rag inkastoo aan illaa iyo hadda la sheegin da’dooda, waxaana mid ka mid ah labadan qof cudurka laga helay maalintii Talaadada ahayd ee loosoo dhaafay.
Wasiir ku xigeennaddu waxay intaas ku dartay in labada qof ee uu cudurkaan laga helay aanay isku meel deggenayn; iyadoo labadan qof ee cudurka laga helay ay ku dhinteen isla deegaankii looga helay.
Geerida labadan ruux ee uu mar kale cudurka Ebola ku dilay dalka Liberia ayaa ku soo beegmaya dhawaan dalkaas looga dabaal-dagay inuu cudurkaas ka dhamaaday cudurka Ebola, inkastoo dalalka dariska la ah uu weli ka jiro.
Xukuumadda Liberia waxay ku adkaysanaysaa mowqifkeedii ahaa inaanay marnaba xiri doonin soohdimaha ay la wadaagto dalalka Guinea iyo Sierra Leone, labadaas dal oo laga soo tabiyay kiisas cusub.
Shacabka dalka Liberia ayaa lagu booriyay inay sii wadaan tallaabooyinka ay kaga hor-tagayaan cudurka sida in gacmaha ay dhaqdaan.
Dhinaca kale, inta u dhaxaysa 100 illaa 200 oo ah shaqaalihii horay ula dagaalamay Ebola ayaa Arbacadii ku xoomay Wasaarada Caafimaadka ee ku taalla magaalada Monrovia; iyagoo halkaas ku qabsaday saraakiishii joogtay.
Sidoo kale, dadka dibadbaxayay ayaa waxay dalbanayeen in la siiyo lacagaha dheeraadka ee ay ahayd inay qaataan markii ay daweynayeen cudurka halista ah ee Ebola. Laakiinse Wasiirka Caafimaadka Bernice Dahn ayaa sheegay in Liberia ay bixisay 99% lacagaha loogu talo-galay ka hortagga khatarta cudurkan, taasoo ay u sii dheerayd mushaar joogta ah oo la siinayay shaqaalaha.
Si kastaba ha ahaatee, dalka Liberia ayaa 09-kii bishii May ee sannadkan Waxaa looga dhawaaqay in cudurka Ebola uu ka dhamaaday.
Dowladda Puntland oo Guddi u Saartay u diyaar-garowga 1-da Agosto
Madaxweynaha Jubbaland oo Maanta dib ugu soo laabtay Kismaayo